Nyankopɔn N’ahendzi no, Ɔyɛ Ebɛnadze? | Asɛmpa
1. Nyankopɔn n’Ahendzi no, ɔyɛ ebɛnadze?
Ebɛnadze ntsi na Jesus yɛ Ɔhen a ɔsɛ fata?​—MARK 1:40-42.
Nyankopɔn n’Ahendzi no yɛ tumdzi a ɔwɔ sor. Ahendzi no bɛba abɛhyɛ tumdzi biara ananmu na ama Nyankopɔn n’apɛdze aayɛ hɔ wɔ sor na asaase do. Asɛm a ɔfa Nyankopɔn n’Ahendzi no ho no yɛ asɛmpa. Nyimpa hia amambu papa na ɔnnkɛkyɛr, Nyankopɔn n’Ahendzi no bedzi dɛm ehiadze yi ho dwuma. Ahendzi no bɛkã nyimpa a wɔwɔ asaase do nyina abɔ mu wɔ koryɛ mu.​—Kenkan Daniel 2:44; Matthew 6:9, 10; 24:14.
Ahendzi biara wɔ ɔhen a odzi do tum. Jehovah eyi ne Ba Jesus Christ dɛ ɔnyɛ n’Ahendzi no do Hen.​—Kenkan Nyikyerɛ 11:15.
Hwɛ video a wɔato dzin Nyankopɔn N’ahendzi No, Ɔyɛ Ebɛnadze?
2. Ebɛnadze ntsi na Jesus yɛ Ɔhen a ɔsɛ fata?
Jesus yɛ Ɔhen a ɔsɛ fata osiandɛ ɔwɔ ayamuyie na ɔyɛ ne biribiara tɔɔtsenn. (John 1:14) Ɔwɔ tum a ɔdze bɔboa nyimpa osiandɛ ɔbɛtsena sor na oeedzi asaase do hen. No wunyan ekyir no, ɔfowee kɔr sor na ɔkɛtsenaa Jehovah n’abanyimfa tweɔnee. (Hebrewfo 10:12, 13) Iyi ekyir no, Nyankopɔn maa no tum ma ɔhyɛɛ ase dzii hen.​—Kenkan Daniel 7:13, 14.
3. Woananom na wɔnye Jesus bɔbɔ mu edzi hen?
Nyimpa kuw bi a wɔfrɛ hɔn “ahotseweefo” na wɔnye Jesus bɔbɔ mu edzi hen wɔ sor. (Daniel 7:27) Ahotseweefo a wodzii kan yii hɔn no nye Jesus n’asomafo anokwafo no. Jehovah akɔ do eyi mbanyin na mbaa anokwafo dɛ ahotseweefo dze bodu ndɛ. Dɛ mbrɛ wonyaan Jesus no, dɛmara na wobenyan hɔn so dɛ sunsum abɔdze.​—Kenkan John 14:1-3; 1 Corinthfo 15:42-44.
Nyimpadodow ahen na wɔbɔkɔ sor? Jesus frɛɛ hɔn a wɔbɔkɔ sor no dɛ “oguankuw ketseaba.” (Luke 12:32) Ewiei koraa no hɔn dodow besi 144,000. Wɔnye Jesus bɔbɔ mu edzi asaase do hen.​—Kenkan Nyikyerɛ 14:1.
4. Aber a Jesus hyɛɛ ase dzii tum no, ebɛn asɛm sii?
Nyankopɔn n’Ahendzi no hyɛɛ ase dzii tum wɔ afe 1914. * Anamɔn a odzi kan a Jesus tui dɛ Ɔhen nye dɛ, ɔtoow Satan nye n’abɔfoe kãa no ho kyeen asaase do. Satan faa ebufuw kɛsenara na ɔhyɛɛ ase kẽkaa ndzɛmba butuwii wɔ asaase nyina do. (Nyikyerɛ 12:7-10, 12) Ofitsi dɛm aber no reba no, adasamba amandzehu ayɛ kɛse paa. Akokoeko, ɔkɔm, ɔyardɔm, nye asaasewosow nyina yɛ asɛnkyerɛdze a ɔkyerɛ dɛ, ɔnnkɛkyɛr ma Ahendzi no eedzi asaase nyina do tum.​—Kenkan Luke 21:7, 10, 11, 31.
5. Ebɛnadze na Nyankopɔn n’Ahendzi no reyɛ ndɛ na ebɛnadze na ɔbɛyɛ ndaamba?
Nyankopɔn n’Ahendzi no nam wiadze nyina asɛnka edwuma no do roboaboa nyimpadodow kɛse bi a wofi aman ahorow nyinara mu ano. Nyimpa ɔpepem pii a wɔdwe rebɛyɛ Nyankopɔn n’Ahendzi no ne mamfo wɔ Jesus no tumdzi ase. Sɛ Nyankopɔn n’Ahendzi no resɛɛ ndzɛmba nhyehyɛɛ bɔn yi wɔ asaase do a, ɔbɔbɔ dɛm nkorɔfo yi ho ban. Dɛm ntsi, hɔn a wɔpɛ dɛ wonya nhyira a Nyankopɔn n’Ahendzi no dze bɛba no bi no nsũa dɛ, wɔbɛyɛ setsie na wɔaabrɛ hɔnho adze ahyɛ Jesus n’ase.​—Kenkan Nyikyerɛ 7:9, 14, 16, 17.
Wɔ mfrenhyia 1,000 mu no, Ahendzi no bɛma botae a nna ahyɛse no Nyankopɔn wɔ ma adasamba no aba mu. Asaase no do nyinara bɛdan paradise. Ewiei koraa no, Jesus dze Ahendzi no bɛhyɛ n’Egya nsa. (1 Corinthfo 15:24-26) Woana na epɛ dɛ ekã Nyankopɔn n’Ahendzi no ho asɛm kyerɛ no?​—Kenkan Ndwom 37:10, 11, 29.
^ nky. 6 Sɛ epɛ dɛ ihu pii fa mbrɛ Bible nkɔnhyɛ kãa afe 1914 ho asɛm a, hwɛ nwoma a wɔato dzin Ebɛnadze na Bible no Kyerɛkyerɛ Hɛn? ne nkrataafã 217-220 no.
Ana Wiadze no n’Ewiei Abɛn?
Susu mbrɛ nyimpa a woetwa hɛnho ehyia no hɔn ndzeyɛɛ nye hɔn suban ma ɔda edzi dɛ yɛtse nda a odzi ekyir no mu, dɛ mbrɛ Bible no akã ato hɔ no ho hwɛ.
Fa mona Fa mona Nyankopɔn N’ahendzi no, Ɔyɛ Ebɛnadze?